Jikọọ modem 3G site na iji Sakis3G | Site na Linux
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke a Netwọk GSMma ọ bụrụ na ị na-eji GNU / Linux Ma ọ bụrụ na ị nwere modem 3G nke na-adịghị arụ ọrụ maka gị na sistemụ gị, mgbe ahụ ị kwesịrị ile anya Sakis3G.
Enweghị m nsogbu ahụ karịsịa mana ịchọrọ ozi maka enyi m wee hụ ederede ahụ dị mfe (Sakis3G), nke nwere ihu ọma, na-enwe ike ịmata gburugburu ya (isi, nkesa, modem, onye ọrụ, gburugburu ebe obibi) ma nye gị njikọ data na sekọnd.
Sakis3G nwere ike hazi modem USB o Bluetooth na saịtị ha na-ekwu na ọ nwere ike na-arụ ọrụ na netwọk CDMA. O nwekwara na nchekwa data ya koodu maka ihe karịrị mba 44 ma ọ bụrụ na obodo gị anọghị, saịtị ahụ na-enye gị ozi iji tinye nke gị.
Cannwere ike ibudata ya na njikọ a ka Nke 386, amd64, armv4t na armv5t ma obu ha abuo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Jikọọ modem 3G site na iji Sakis3G
Isi nke Ama? Daalụ 🙂
Nye ya ebe nbudata a sitere na njikọ a, ma ebe ahụ ọ na-eziga gị na peeji nke sakis3g, ọ na-ewetakwa n'akụkụ aka nri nhọrọ iji hụ vidiyo nke otu mmemme ahụ si arụ ọrụ yana otu esi esi wụnye ya, ọ naghị esiri ike o doro anya hahahaha, mana Anyị ga-ahụ, echi ma ọ bụ ụbọchị na-esote mgbe m ga-azụta bandwidth m ma nwalee obere ihe omume a, nke mere na ọ jikọtara na Fedora 16 na Mint 12, hehehehehe ị ga-anwale ya iji nye ha ezigbo data ziri ezi na otu esi funka.
Achọpụtara m ya n'afọ gara aga na ọ fọrọ nke nta ka ihe niile dị na Linux… ọ na-arụ ọrụ n'onwe ya !! M echetaghị modem nhazi na na sakis3g m ga-abanye PIN
Ihe m na-amaghị, mac_live mana m chere na ọ bụ naanị maka netwọkụ 3G, ọ bụghị maka brọdband
Ọ dị mma, echere m na ị ziri ezi, n'eziokwu m 16, achọpụtara m oge mbụ 3g m bụ ZTE dị mma, enwere 2 3, achọpụtara m site na mbido, ugbu a ejikọrọ m ya na ọ na-efe efe, Achọrọ m ịhazi ya tupu m aga ọrụ, icho ihe obula hehehehehe ma ihe nile nke oma. Anyị etinyela ọtụtụ ihe na Linux na-enweghị ịhazi, nke nta nke nta anyị na-aga n'ihu.
Enwerem ubuntu na modem di nma mana m wunye Linux mint ma echere m na m ga-ebudata ya hahaha ekele maka njikọ
Zaghachi Dj Santix